हामीले ख्यान गरेनौँ भने यसले धेरै जोखिम निम्त्याउँछ
कार्तिक ०८, २०७७ ०७:४९ मा प्रकाशित
म पाटन अस्पतालमा ६ वर्षदेखि नर्सका रुपमा कार्यरत छु । म अस्पतालको प्रसूती वार्डमा काम गर्दै आएको छु । कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएदेखि कोभिड प्रसूती वार्डमा खटिएको छु ।
काम सुरु गरेपछि ६ वर्षको अवधिमा मैले एउटा दशैं मात्रै परिवारसँग बसेर मनाउँन पाएको छु ।
प्रसूती सम्बन्धी समस्या भएका र कोभिड स्रक्रमण देखिएका, शंकास्पद बिरामीको उपचार रेखदेख गर्ने हाम्रो काम हो। ६ महिना भयो त्यहाँ काम गर्न थालेको।
कोही अन्य परीक्षण गर्न आउँदा संक्रमित देखिनुहुन्छ । कोही गर्भवती चाहिँ कोभिडसँग मिल्दाजुल्दा लक्षणहरु लिएर आउनु हुन्छ । श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी, श्वास फेर्न गाह्रो हुने ज्वरो आउने, रुघाखोकी लाग्ने जस्ता लक्षण लिएर आउनुहुन्छ । हामी उहाँहरुलाई शंका गरेर छुट्टै आइसोलेसनमा राखेर कोभिड परीक्षण गर्छौँ । पोजेटिभ आएको खण्डमा कोभिड वार्डमा र रिपोर्ट नेगेभिट आएमा जेनेरल वार्डमा सिफ्ट गर्छौँ ।
कसैकसैलाई जटिल समस्या
सुरुमा सामान्य लक्षण देखिएर आउनुभएका गर्भवतीहरुलाई पनि सुत्केरी भएपछि, शल्यक्रिया गरेपछि केहीलाई जटिल समस्याहरु देखिने गरेका छन् । अक्सिजनको मात्रा कम हुने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ कतिपयलाई सुत्केरी भइसकेपछि आइसीयूसम्म लैजानुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ ।
प्रसूती कोभिड वार्डमा सुरुका दिनमा थोरै संख्यामा आउनुहुन्थ्यो । अहिले संक्रमणको दर ह्वात्तै बढेका कारण कोरोना पुष्टि भएका गर्भवतीहरु दिनहुँजसो केही संख्यामा आउनुहुन्छ ।
सुत्केरी गराउनका लागि आउनुभएका कतिपय गर्भवतीहरु कोभिडका लक्षणसहित आउनुहुन्छ । उहाँहरुलाई अन्य व्यक्तिको जस्तो पीसीआर रिपोर्ट कुरेर बस्ने अवस्था पनि हुँदैन । तत्काल उपचार सुरु गर्नुपर्छ । पीसीआरको रिपोर्ट आइसक्दा धेरै जसो सुत्केरी भइसक्नु भएको हुन्छ।
अब परिवारमा के हुने हो ? हुनेवाला बच्चालाई के होला ? अब कसरी उपचार होला भनेर आत्तिने पनि गर्नुहुन्छ ।
पछिल्ला दिनमा चाहिँ अस्पताल आउने गर्भवतीलाई सुरुमा एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिन्छ । आधा घण्टाभित्रै रिपोर्ट आउँछ । र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएकालाई छुट्टै राखिन्छ । यसरी छुट्टै राखे पनि उहाँहरुलाई अवस्था हेरेर गर्नुपर्ने सबै उपचार गर्छौँ । नर्मल डेलिभरी र अप्रेशन के गर्नुपर्ने हो, त्यही अनुसारका सेवा उपलब्ध हुन्छ । पीसीआर रिपोर्ट नआए पनि सुत्केरी महिलाको उपचारमा कुनै ढिलाई हुँदैन ।
धेरैजसो कोभिडका कुनै लक्षणबिना आउनुहुन्छ । जब उहाँहरुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुन्छ, कतिपय त आक्रोशमा पनि आउनुहुन्छ । हामीलाई कसरी कोरोना हुन्छ ? कहीँ नजाने घरमै बस्ने मान्छेलाई कसरी कोरोना देखियो ? भनेर आक्रोशित बन्नुहुन्छ ।
कतिपयले भने यसलाई सहजरुपमा लिनुहुन्छ । अहिलेको समयमा जो पनि जुनसुकै बेलामा संक्रमित हुनसक्छ भन्नुहुन्छ । आइसोलेसनमा बसेर राम्रो हेरचाह पाइहालिन्छ भनेर सामान्य रुपमै लिनुहुन्छ ।
कोहीकोही चाहिँ रिपोर्ट पोजेटिभ आउनेबित्तिकै धेरै अताल्लिनु हुन्छ । अब परिवारमा के हुने हो ? हुनेवाला बच्चालाई के होला ? अब कसरी उपचार होला भनेर आत्तिने पनि गर्नुहुन्छ ।
शिशुको व्यवस्थापन कसरी ?
संक्रमित महिलाबाट जन्मिएका शिशुहरुलाई आमाबाट छुट्टै राख्ने व्यवस्था छ । संक्रमित आमाबाट नजिक राख्दा उसमा पनि संक्रमण हुनसक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । संक्रमित आमाबाट जन्मनेवित्तिकै शिशुलाई राख्ने छुट्टै नर्सरी छ । त्यहाँ बच्चाको हेरचाह गर्ने छुट्टै व्यवस्था छ । त्यहाँ राखिसकेपछि शिशुमा पनि कोभिड परीक्षण हुन्छ। पोजेटिभ रिपोर्ट आएमा छुट्टै राखेर उपचारहुन्छ ।
सबैले तोकेका स्वाथ्य मापदण्ड अपनाएरै दशैँ मनाऔँ ।
नेजेटिभ रिपोर्ट आएको खण्डमा परिवारका अन्य सदस्यलाई कोभिड परीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट आएको व्यक्तिलाई जिम्मा दिइन्छ । आमा बसुन्जेल अस्पतालमै राख्नुपर्छ भन्नेहरुलाई पनि सुरक्षित तरिकाले नर्सरीमै राख्छौँ । आमाको रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेपछि बच्चाहरु जिम्मा दिन्छौँ ।
दशैँ फेरि आउँछ सजग बनौँ
कोभिड संक्रमणले तीब्र भइरहेका बेला दशैं आयो । यस बेलामा पारिवारिक जमघट, भेटघाट, आउजाउ धेरै हुन्छ । हामीले ख्याल गरेनौँ भने यसले धेरै जोखिम निम्त्याउँछ । हामीलाई केही नभए पनि हामी टीका थाप्न आशिर्वाद लिन ज–जस कहाँ जान्छौँ उहाँहरु त वृद्ध हुनसक्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई संक्रमणको जोखिम हुन्छ । यसपाली बरु भिडियोच्याट आदिबाट आशीर्वाद लिउँ । सबैले तोकेका स्वाथ्य मापदण्ड अपनाएरै दशैँ मनाऔँ । पक्कै अर्काे दशैं सुखद तरिकाले मनाउँन सफल हुन्छौँ ।
विगतका वर्षमा हामी अस्पतालमै हुँदा यहीँ रहेका पाका बिरामी, अन्तिम अवस्थामा पुगेका बिरामीबाट दशैंको टीका लगाउने गर्थ्यौँ । यो साल उहाँहरुमा संक्रमण होला भन्ने डर छ ।
दशैंभर ड्यूटी छ
मेरो घर नयाँ बानेश्वर हो । परिवारमा श्रीमान, सासू, ससुरा हुनुहुन्छ । सासू मधमेह र श्रीमान मुटुरोगी हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई कोरोनाको उच्च जोखिम छ । यसकारणले गर्दा म प्राय माइतीमै बस्दै आएको छु । ड्यूटी गर्ने क्रममा पटक–पटक कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परिन्छ ।
क्वारेन्टाइन बसिरहनु पर्ने हुन्छ । सँगै ड्यूटी गरेका कसैमा पोजेटिभ रिपोर्ट आयो भने केही दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । परीक्षण गरेर रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएपछि फेरि ड्यूटीमा आउनुपर्छ । माइतीमा बस्दा पनि म छुट्टै कोठामा बस्छु ।
दशैं भनेर यसपाली छुट्टी छैन । धेरै सुरक्षित भएर काम गर्ने प्रयास गरे पनि अहिले यस अस्पतालका धेरै जना संक्रमित हुनुभएको छ । कति जना आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ । केही क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ । यसबेलामा सायद एकाधबाहेक कसैले छुट्टी पाउनुहुन्न होला । हामी दशैंभर ड्यूटीमै हुन्छौँ । काम सुरु गरेपछि ६ वर्षको अवधिमा मैले एउटा दशैं मात्रै परिवारसँग बसेर मनाउँन पाएको छु । अरु दशैंमा चाहिँ अस्पतालमै ड्युटी गरेँ । त्यसबेलामा पनि सिफ्ट हुने भएकाले आफ्नो ड्युटी सुरु हुनुअगाडि वा ड्यूटी सकिएपछि दशैंको रमाइलोमा सामेल भएर चित्त बुझाउनु पर्थ्यो । बिहान ड्यूटी भए ड्यूटी सकेर गएर टीका लगाउने । बेलुका ड्यूटी भए टीका लगाएर काममा आउने गर्थ्यौँ ।
विगतका वर्षमा हामी अस्पतालमै हुँदा यहीँ रहेका पाका बिरामी, अन्तिम अवस्थामा पुगेका बिरामीबाट दशैंको टीका लगाउने गर्थ्यौँ । यो साल उहाँहरुमा संक्रमण होला भन्ने डर छ । त्यसो गर्न पनि नमिल्ने भएको छ । अहिले कोभिडले धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यस्तो बेलामा हामीलाई मात्रै समस्या परेको होइन । भावनामा मात्रै बगेर पनि भएन । यो साल सुरक्षित रहन सक्यौँ भने अर्काे दशैं पक्कै खुसीसाथ मनाउन पाइन्छ भन्ने सकारात्मक सोचकासाथ ड्यूटीमा खटिएका छौँ ।